देउवा सरकारलाई सुवास नेम्वाङको प्रश्न– ‘जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने हो भने कुर्सी छाड्न किन ढिला ? « Pahilo News
देउवा सरकारलाई सुवास नेम्वाङको प्रश्न– ‘जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने हो भने कुर्सी छाड्न किन ढिला ?
प्रकाशित मिति :7January, 2018 9:38 pm
काठमाडौँ, २३ पुस । नेकपा (एमाले) का नेता सुवास नेम्वाङले प्रदेश सांसदलाई काठमाडौँमा नै शपथ खुवाउने काम प्रदेशका सांसद र जनताको भावनाविपरीत हुने बताएका छन् । आइतबार सञ्चार केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको ‘वाम गठबन्धनका चुनौती र अब बन्ने स्थायी सरकार’ विषयको अन्तक्र्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले निर्वाचनमा दिइएको जनादेशलाई दराजमा थन्काएर राख्दा जनताको अधिकार हनन हुने पनि दाबी गरे । कार्यक्रममा नेम्वाङले निर्वाचन आयोगसँग पनि केही असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘जनादेशलाई चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्छ,’ उनले आयोगप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘म जनादेशलाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गर्छु ।’
पूर्वसभामुख नेम्वाङले प्रतिनिधिसभाको मत परिमाण सार्वजनिक नगरेर सरकार गठनको समयलाई लम्ब्याउन खोजिएको भन्दै सरकारले प्रदेश प्रमुख मात्र नभई प्रदेश मुकाम पनि तोक्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘जिम्मेवारी पूरा गर्ने ठाउँमा बस्न रहर गर्ने तर बसिसकेपछि त्यो जिम्मेवार पूरा नगर्ने काम हुनुहुँदैन’, उनले थपे ‘कि जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने हो भने कुर्सी छोड्नुप¥यो ।’